यसकारण हुन्छ नाक, कान, घाँटीको क्यान्सर | Safal Khabar
यसकारण हुन्छ नाक, कान, घाँटीको क्यान्सर
आइतबार, ०८ असार २०७६, १३ : ०८
नाक, कान, घाँटीरोग विशेषज्ञ
काठमाडौं इएनटी अस्पताल
काठमाडौँ । सामान्यतया शरीरको कुनै भागमा कोषिकाहरू अनियन्त्रित भएर बढ्नुलाई क्यान्सर भएको मानिन्छ । नाक, कान र घाँटीमा पनि विभिन्न समस्याका कारण क्यान्सर हुने गर्छ । सुरुवाती चरणमै उपचार नगर्ने तथा प्रायः शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामी धेरै हुने भएकाले नाकरकानरघाँटी क्यान्सरको चर्चा ज्यादै कम हुने गरेको छ ।
जुनसुकै उमेरका मानिसलाई नाकरकानरघाँटीको क्यान्सर हुन सक्छ । यद्यपि, ४० वर्षभन्दा माथिकालाई क्यान्सरको जोखिम बढी हुने गर्छ । नेपालमा करिब एक लाखभन्दा बढी मानिस नाकरकानरघाँटीको क्यान्सरबाट पीडित भएको तथ्यांक छ ।
पछिल्लो समयमा कतिपय मानिसमा युवाअवस्थामै नाक÷कान÷घाँटीको क्यान्सर देखिने गरेको छ । यसको प्रमुख कारण अत्यधिक धूम्रपान र मद्यपान हो । चुरोट, तमाखु, बिँडी, गुट्खा, पान–पराग र मदिरा सेवनले नाक, कान र घाँटीमा संक्रमण गराउँछ ।
वातावरणिय प्रभाव नाक/कान/घाँटीको क्यान्सरको अर्को कारण हो । धुवाँ, धुलो र प्रदूषणका कारण क्यान्सरको जोखिम हुने गर्छ । त्यस्तै, विकिरणले गर्दा पनि क्यान्सर हुन्छ । विकिरणयुक्त क्षेत्र तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने मानिस बढी पीडित हुने गर्छन् ।
वंशाणुगत गुणका कारण पनि नाक/कान/घाँटीको क्यान्सर हुने जोखिम रहन्छ । तर, यसको सम्भावना ज्यादै थोरै हुन्छ । परिवारका कुनै सदस्य क्यान्सर पीडित भएमा बच्चामा पनि हुने सम्भावना हुन्छ ।
क्यान्सर गराउने खाद्यवस्तुको सेवनले पनि क्यान्सर हुने गर्छ । धेरै पिरो तथा पोलेको खानेकुरा बढी खाएमा यस्तो किसिमको क्यान्सरको सम्भावना रहन्छ ।
अंग र रोगको अवस्थाका आधारमा क्यान्सरको लक्षण फरक हुने गर्छ । मुखमा घाउ आएर लामो समयसम्म निको नहुनु तथा मुखभित्र सेतो दाग वा धब्बा आउनुजस्ता कारणले मुखमा क्यान्सर हुन सक्छ । मुखमा घाउ आएर लामो समयसम्म निको नहुनु वा दाँतले बारम्बार छुने ठाँउमा घाउ भएमा लामो समयपछि संक्रमण हुने गर्छ ।
घाँटीको क्यान्सर भएमा आवाज धोद्रो हुने, सास फेर्न र खाना निल्न गाह्रो हुने तथा सुन्निनेजस्ता लक्षण देखिन्छन् । कानमा संक्रमण भएमा रगत बग्ने तथा कान नसुन्ने हुन सक्छ ।
धुलो–धुवाँ र विभिन्न किसिमका प्रदूषणले नाकमा समस्या हुन सक्छ । खासगरी लामो समयसम्म काठको काम गर्ने मानिसमा धुलो नाकमा पस्ने सम्भावना हुन्छ । जसका कारण संक्रमण भई क्यान्सर हुने गर्छ ।
धूम्रपान, मद्यपान र धुवाँ–धुलोबाट बच्नुपर्छ । त्यस्तै, पिरो र पोलेको खानेकुरा बढी सेवन गर्नुहुँदैन । नाक, कान र घाँटीमा घाउ भएमा तुरुन्त उपचार गर्नुपर्छ ।
क्यान्सरका चरण विभिन्न हुन्छन् । त्यसैले, लक्षण देखिनासाथ सुरुवातीको चरणमै उपचार गर्न सकेमा जटिल क्यान्सर हुनबाट जोगिन सकिन्छ ।
क्यान्सर भइहालेमा सर्जरी, रेडियोथेरापी र किमोथेरापीबाट उपचार गर्न सकिन्छ । –नया पत्रिकाबाट
स्क्रब टाइफस र डेंगुको सङ्क्रमण बढ्दै, के हो स्क्रब टाइफस ?
मास्कको बिसर्जनमा ध्यान नपु¥याउदा संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम बढ्दो‚ यसलाई रोक्न के कस्ता छन् त उपाय....
थप चार कम्पनीको स्यानिटाइजरमा विषाक्त रसायन, तपाईंले प्रयोग गरिरहेको त परेन ?
असोज १ गते सबैको घरमा दीप प्रज्वलन गरौँ : स्वास्थ्य मन्त्रालय
चन्दा संकलन गरेको अभियोगमा पक्राउ
काठमाडौं उपत्यकामा ७५५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि